Akụkọ - Hangzhou Jiande Enterprise ngwa ngwa kpọghachiri ndị ọrụ karịrị 100
Hangzhou Jiande Enterprise ngwa ngwa akpọghachi karịa ndị ọrụ 100
Hangzhou Jiande Enterprise na-akpọghachi ngwa ngwa karịa ndị ọrụ 100, ma gbue ụgwọ ọrụ ha okpukpu atọ iji gbaa ume oge gbasaa iji mee ihe mkpuchi!
Site na ntiwapụ nke pneumonia ọhụrụ coronavirus na Wuhan, mmepụta na ibute ihe nkpuchi aghọwo isiokwu nke nchegbu ọha na eze.
Dị ka onye na-eduzi ụlọ ọrụ na R&D na n'ichepụta ihe akụrụngwa na-echebe akụkụ iku ume nke ụlọ ya nke 35%, Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd zaghachiri ngwa ahịa na-achọ ahịa site na oke ọrịa coronavirus ọhụrụ na-efe efe wee kpọọ ndị ọrụ ozugbo. gaa ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji dozie N'oge Afọ Ọhụrụ ndị China, ọkara ọkara ụbọchị ga-apụ na mgbede Afọ Ọhụrụ, ma oge fọdụrụ bụ nke ejiri zuru ezu maka mmepụta.
Na mbu, ihe karịrị ndị ọrụ otu narị na iri abụọ bụ ndị lọtara ezumike na ụbọchị iri na asatọ nke ọnwa Jenụwarị, mgbe ha natachara oge ọrụ ha, hapụ ọrụ ha n'ụlọ, laghachi na ọkwa ha ozugbo, ma tinye onwe ha n'ọrụ iji hụ na e nwetara ihe nkpuchi.
Workshoplọ ọrụ mmepụta ihe nọ na-aga n'ihu, ndị ọrụ wee nọdụ na tebụl ọrụ na-agba ọsọ na-agba ọsọ iji kpuchie ihe. Mgbe ndị ọrụ ahụ rụchara mgbatị ultrasonic nke mkpuchi nchebe, mmadụ ozugbo wepụrụ nkpuchi ahụ.
“Taa, ọnụ ọgụgụ nke iwu niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe arịgoro karịa nde 80, na kwụsịtụrụ lọjistik. Site na ụgwọ ọnwa atọ, anyị ga-akpọ ndị ọrụ niile gbara anyị gburugburu enwere ike ịkpọtụrụ anyị ma gbalịsie ike iji mezue ya. Iwu, ọnụ ahịa ụlọ nrụpụta ihe nke ihe nkpuchi ahụ ka bụ otu. ” Lin Yanfeng, onye isi njikwa nke Party Party nke North Korea na ihe nkpuchi United States na Jiande City, kwuru na anyị bụ ngalaba nchekwa ihe mberede mba, na ọdịmma nke mba ahụ ga-ebu ụzọ.
Omelọ ọrụ Chaomei malitere ọrụ ndị dị mkpa maka mba ahụ n'oge oge SARS, na-enye ihe mkpuchi SARS maka Beijinglọ Ọgwụ Beijing Xiaotangshan, Dlọ ọgwụ Ditan, Hospitallọ Ọgwụ Na-efe Ọrịa Beijing, Ngalaba Nchịkwa nke Ndị Agha Mgbapụta nke Ndị China na Ebe Nchekwa Ihe Mberede.
Dabere na akụkọ, a na-atụ anya na site na Jenụwarị 22 ruo ụbọchị nke anọ nke Afọ Ọhụrụ, na ụlọ ọrụ ahụ na-ekwe nkwa kwa ụbọchị nke nkpuchi 30,000, mmepụta 50,000 kwa ụbọchị site na nke anọ ruo ụbọchị nke asatọ, yana ihe karịrị 100,000 kwa ụbọchị na-emepụta ụbọchị nke asatọ.